အငြိမ်းစားအဘိုးကြီးတွေအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ရောဂါ – ပင်စင်မျှော်ရောဂါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အငြိမ်းစားအဘိုးကြီးတွေအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ရောဂါ – ပင်စင်မျှော်ရောဂါ
အငြိမ်းစားအဘိုးကြီးတွေအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ရောဂါ – ပင်စင်မျှော်ရောဂါ
Posted by black chaw on Aug 26, 2011 in Copy/Paste | 19 comments
ကျွန်တော့် အဖေက ဒုအရာခံဗိုလ် ရာထူးနဲ့ စစ်တပ်ကအငြိမ်းစားယူခဲ့တာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကပါ။ စစ်မှုထမ်းသက် နှစ် ၄၀ ကျော်ခဲ့တဲ့ စစ်သားအိုကြီးတစ်ယောက်ပေါ့။ အခုလက်ရှိ ပင်စင် ၂၅၀၀ ကျပ်နဲ့ သားသမီးတွေလုပ်စာနဲ့ အငြိမ်းစားကြီးတစ်ဦးပါ။ မကြာမီက နိုင်ငံတော်က ပင်စင်လစာတွေတိုးပေးလိုက်တော့ အိပ်ယာထဲလဲနေတဲ့ အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် အဖိုးအိုကြီးဟာ ကျောက်ခဲရေပေါ်တာကွ ဆိုပြီး ထထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ ၂၆-၈-၂၀၁၁ နေ့ မနက် ၁၁း၄၀ အထိ သူ့ပင်စင်ဘယ်လောက်ရမယ်၊ ဘယ်အချိန်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာမသိသေးတော့ တမျှော်မျှော်နဲ့ နေ့တိုင်းမျှော်နေရတဲ့ အငြိမ်းစားအိုကြီးတစ်ယောက် ပင်စင် မျှော်ရောဂါတစ်ခုတိုးနေရပါပြီ။ ဘာတွေကွာခြားလို့လဲမသိ သူ့ လိုအငြိမ်းစားကြီး တစ်ချို့ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာ ကြားနေရပြီး ဇူလိုင် ပင်စင်ထုတ်ပြီး မကြာမီသြဂုတ်ပင်စင်ပါထုတ်ရတော့မယ် သူ့ခဗျာ ပင်စင် ဘယ်လောက်ရသလဲတောင် မသိသေးပါဘူး။ ပင်စင်စားအဘိုးကြီးတွေကိုတော့ ဒီလို မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ် ဗျာ။ ရတဲ့သူက နှစ်လစာတောင်ထုတ်တော့မယ်။ မရတဲ့သူက ဘယ်လောက်ရမလဲတောင်မသိသေးတာကတော့ တနေရာမှာ လွဲနေပြီထင်တာပါပဲဗျာ။
အိမ်က အဖွားလည်း သူဘယ်လောက်ထုတ်ရမယ် ဘယ်တော့ထုတ်ရမယ် သိချင်လွန်းလို့ မျှော်နေရှာတာပဲ။
အကြောင်းကြားစာကလည်း မလာသေးတော့ ကိုယ်လည်း ဘာလုပ်ပေးရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။
မေးကြည့်တော့လည်း စီစစ်နေတာမပြီးသေးလို့ ဘာညာ ဝါးတားတားပဲ အဖြေရတယ်။
Back pay နဲ့ ပြန်ပေးရင် ကောင်းမယ်..
ဟုတ်တယ်နော် back pay ရှိရင်သိပ်အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်။သူတို့ ခမျာ နိုင်ငံအတွက် အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပြီး ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ ပြန်မှုမပေးခဲ့ကြဘူးနော်။မရသေးတဲ့ လူတွေကိုစိစစ်နေတုန်းဆိုတာက လဲကြာလိုက်တာ ခုထိကိုမပြီးနိုင်သေးဘူး။နှစ်လတောင်ပြည့်တော့မယ်။:(
ရတဲ့သူတွေ ရနေပြီဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို ပေးတာပါလဲ။ သူတို့ကျတော့ ဘယ်လောက်တိုးတယ်ဆိုတာ သိရပြီလား။ ခုက အရင်လလည်းမရသေး နောက်လည်း မရဆိုတော့ ဘယ်နှလစာတွေ ပေါင်းပေးမလို့လဲမသိဘူးနော်…
ကျွန်တော်တို့ အမျိုးထဲမှာ ပဲတစ်ယောက်က ဗိုလ်ကြီးအငြိမ်းစားပါ။ သူက ဇူလိုင်လအတွက်ထုတ်ပြီးတာ တော်တော်တောင်ကြာသွားပါပြီ။ သူက တစ်သိန်းသုံးသောင်းခွဲလောက်ရပါတယ်။ တကယ်ပဲ မရသေးတဲ့လူတွေ၊ ဘယ်လောက်တိုးလဲမသိသေးတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
ပင်စင်တွေကိုစိစစ်နေတယ်လို့တော့ ကြားတာပါပဲ ။ ဘယ်ချိန်ပြီးမယ်တော့ မသိသေးဘူး ။ တစ်ချို့လဲပင်စင်လစာတွေရနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတော့ကြားရတယ် ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖို့ကတော့ ခုတိုးတဲ့ပင်စင် နှစ်သောင်း ၊ သုံးသောင်းဆိုတာ မပြောပလောက်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် … အိုကြီး အိုမနဲ့ အငြိမ်းစား အဖိုးအဖွားတွေမှာတော့ တစ်ကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ငွေကြေးပါ ။ ပင်စင်တင်ကြတဲ့အချိန်တုန်းက တုတ်ကောက်လေးနဲ့ တုန်တုန်ချိချိ ဘဏ်ရှေ့မှာ တန်းစီနေတဲ့အဖိုးအဖွားတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွကို နုတ်ဆက်နေသံတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာ တစ်ကယ့် ကြည်နူးစရာပါပဲ ….. ။
အော် ဟုတ်ကဲ့ ခုလိုမျိုးကြည်နူးစရာလေးတွေပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် ဟိုကောင် သမ္မတကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကိုလေးရှိအောင်အရင်သင်ပေးလိုက်ပါ။သူရှေ့ ကသွားလေသူ ကိုရွှေတော့ ပင်စင်တွေစားပြီး စားပိုးနစ်နေပီ။ဘာအဖြစ်မှမရှိတဲ့ လူက တိုင်းပြည်ကို မလွှဲသာမရှောင်သာလို့ တာဝန်ယူရသလေးဘာလေးညာလေးနဲ့ ။နားခါးလိုက်တာနော်
နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကုန်းမြင့်သာမှာရှိတဲ့ စစ်ရုံးကို ရောက်လာကြနေတဲ့ စစ်တပ်က အငြိမ်းစား ယူထားတဲ့လူတွေ အငြိမ်းစားမိသားစုတွေ တဖွဲဖွဲပါဘဲ။ နောက် ၃ ၊ ၄ လ အတွင်း ဒီပြသနာကတော့ ရှိနေအုန်းမယ် ထင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမို့လို့ပါ။ FIFO ပေါ့ဗျာ။ First in First Out။ အရင်လုပ်သူ အရင်ရမယ်။ ကြားထဲက ဘာလာဘ်ထိုးတာတွေ ဘာတွေ မပါကြေးပေါ့ဗျာ။
လာဘ်ထိုးတာမပါကြေးက ဒီမှာလာပြောလို့ မရဘူးနော် လူကလေး. စစ်ရုံးကစစ်ခွေးတွေကိုနားလည်အောင်ပါးရိုက်သင်ပေးလိုက်ပါဦး။ဘဝအတွက် အချိန်ကုန်ခံခဲ့သူတွေ ကိုအားနာပေးဖို့ ဘဲလိုပါတယ်။ကိုယ်သာဆိုနေနိုင်ပေါ့မလား စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။တရားစွဲမှာကြောက်လို့ အခြေခံဥပဒေတောင် ဥာဏ်မမှီတမှီ နဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ် အချိန်ကုန်ရေး၊အဓမ္မအတည်ပြုထားရတာ။လွယ်တာမှတ်လို့ ။
မရသေးသူများလည်း တွက်ချက်ပြီးတဲ့အခါ စတိုးတဲ့လကစပြီး တိုးတဲ့နှုန်းအတိုင်း ရမယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
မမ ရေအဲဒါဆိုရင်တော့ ဝမ်းသာစရာပါ။ဘယ်လိုကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ အားလုံးညီတူမျှတူဖြစ်စေချင်ပါတယ်။အားလုံးသောဝန်ထမ်းတွေဟာ သူ့ ဘဝရဲ့ အချိန်တော်တော်များကိုပေးဆပ်ခဲ့ကြသူတွေပါ။မာန်ပါပြီး. အပေါ်မှာရေးမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်
2500 ကမှတော်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော့်အိမ်မှာဆို 600 ကျပ်ကလေးနဲ့မျှော်နေရတာပါဗျာ။တိုးပေးမယ်ဆိုတော့လည်း
ကျွန်တော့်အိမ်မှာဆို 600 ကျပ်ကလေးနဲ့မျှော်နေရတာပါဗျာ။တိုးပေးမယ်ဆိုတော့လည်း
ဟင်. ယမမင်းကြီးက လဲပင်စင်စားပါလား။ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်
တချို့ တွေ ရပါပြီ……
တင်တဲ့ နေရာမှာ ထပ်တိုးပင်စင်လစာထုတ်ခွင့်တင်ရပါတယ်…
nature မှန်ပါတယ်။အချိန်ယူရပါမယ်။တချို့ဆို မူရင်းလစာမမှတ်မိလို့ ပြန်တွက်နေရတာ။လစာအပြင် နှစ်တိုးလစာ နဲ့အခြားစရိတ်တွေ တွက်ပြီးမှ အငြိမ်းစားယူတဲ့ ရာထူးနဲ့ ယခုရတဲ့ လစာကနေတွက်ရတာပါ။